Tinogona kugadzirisa mavara akasiyana-siyana ekusvetuka tambo zvinoenderana nezvaunoda, dhayamita 3mm 3.8mm 4mm Waya yemukati inogona kuve yakashongedzwa/isina tsvina, iyo yekupfeka inogona kuva PU/PVC/Naironi.
Plastic Coated Galvanized / Stainless Steel Wire Rope
Plastic yakavharwa simbi waya tambo, shandisa high quality carbon simbi:45#/55#/60#/70#, nezvimwewo,Zvakare, 304, 316 Stainless simbi mhando inowanikwa.Plastic coating yekunze chikamuvane mavara akasiyana,
kunge dema, pachena, bhuruu,yellow, orenji, girini, tsvuku,etc;zvinhu zvePVC, PU, ​​Nylon ndizvoiripokuzadzisa zvido zvako zvakasiyana.
Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. iri muShuiwan Town, Wudi County, Binzhou City, Shandong Province.Tine makore gumi ruzivo rweR & D nekugadzira, chirimwa chinovhara 10000 square metres.Chigadzirwa chedu simbi waya tambo yakawanda kwazvo. inoshandiswa mukugadzirisa zvinhu, magetsi, kuvaka, zviteshi uye imwe-nguva cable seal industry, nezvimwewo.Zvigadzirwa zvedu zvine nzvimbo yakanaka, yakanaka verticality, kusununguka kwakanaka uye compactness, hapana mabhura, uye hapana tambo yakatyoka mune imwe reel.Isu tine zvakare nyanzvi pre-kutengesa uye mushure-yekutengesa sevhisi timu, kuti ive nechokwadi chemhando nemasevhisi.
Zvakapfuura: High Performance China Plastic PVC Coated Galvanized Steel Wire Tambo
Zvinotevera: 7*7 1*19 PVC/PU yakavharwa simbi waya tambo kusvetuka tambo 3mm 4mm
4mm yakavharwa tambo yewaya
Galvanized 7x7 Steel Wire Tambo
Pvc Yakaputirwa Yakabatiswa Waya Rope Factory
waya yekusvetuka tambo
bata kusvetuka tambo, tambo yokusvetuka isina tambo, nyanzvi yekusvetuka tambo, svetuka tambo tenga, kugwinya kusvetuka tambo, kusvetuka tambo akachenjera,